Ebube na-echekwa ụgbọala maka ebe a na-ere, Led Park, Decorative Parking Lot Lights fabric in China
Nkọwa:Ejiri Ogwe Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọala,Led Park,Ebube Mpempe ụgbọ oloko mara mma,Ebe a na-echekwa ya,,
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ
Elu Bay ìhè
Led Corn Bulbs
Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ
Echichi na-ehichapụ ya
Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm
Ejiri Lightbox Shoebox
Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
Mbara Igwe Ochie
Iju Mmiri Iju Mmiri
Ngwaahịa nke Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ejiri Ogwe Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọala , Led Park suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ebube Mpempe ụgbọ oloko mara mma R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
240W Ogwe ụgbọala ụgbọala na-adọba ụgbọala ọkụ ọkụ 4000k  Kpọtụrụ ugbu a
200W Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
N'èzí Na-adọba ụgbọala Mgba ọkụ Bulbs 150W 19500lm  Kpọtụrụ ugbu a
Ụzọ 200W Led Pathways Slipfitter Dusk Iji Dawn  Kpọtụrụ ugbu a
240W Led Pathway Area Light Saxtures Slipfitter  Kpọtụrụ ugbu a
100W Na-echekwa ebe a na-edebe ihe igwefoto  Kpọtụrụ ugbu a
240W N'èzí Led Street Light Fixture 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
320W Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
240W Na-edebe ọdụ ụgbọ oloko Lot Street  Kpọtụrụ ugbu a
200W n'èzí n'èzí ụgbọala Lot Street Lighting Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
150W Ogwe Mpempe ụgbọala Na-ere Ahịa Ejiri Ìhè 19500LM  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ụzọ Ịgba Ọhịa n'èzí  Kpọtụrụ ugbu a
320W Jiri Oghere Uhie Azụ Ụgbọ Mmiri na Dawn  Kpọtụrụ ugbu a
320W 480 Volt Led Poles Lights with Photocell  Kpọtụrụ ugbu a
240W Gburugburu ebe a na-ekpo ọkụ ọkụ Fotocell  Kpọtụrụ ugbu a
300 Watt Led Na-adọba ụgbọala na ọkụ ọkụ ọkụ 39000LM  Kpọtụrụ ugbu a
240W Ogwe Ụlọọrụ Na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
200 Watt Led Na-adọba ụgbọala na Lot oghere Light Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
150 Watt n'èzí na-eburu na-echekwa ogwe ọkụ nke ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
240W LED Shoebox Light Fixture 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
150W Dusk to Dawn Led Parking Garage Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ọrụ mpempe ụgbọala nke ụgbọala anyị 240W bụ 130lm / w na 31200lm na nke 300w nke ụgbọala mpempe ụgbọala nke ụgbọala nwere ike dochie HPS / HID 10 00 watt . Ụlọ Mpịnye Ogwe Uhie Mpempe ụgbọala bụ Ụdị mmiri 3M na IP65. Anyị bụ ndị na- adọba...
Ọnụahịa otu: USD 78.99 / Piece/Pieces
Ejiri Plight Na-agbanwe 200W bụ 26000 lumen mmepụta na ọtụtụ ugboro na-enwu gbaa karịa ìhè ọdịnala. Mwube Iju Mmiri a nke ụgbọala a 200w nwere ike dochie 700 watt HPS / HID. Ogwe Ọdụ Ụgbọ Epeepe Na-adọba ụgbọala nwere ọla kọpa ma ọ bụ agba ojii na...
N'èzí Na-adọba ụgbọala Mgba ọkụ Bulbs 150W 19500lm
Ọnụahịa otu: USD 59.99 / Piece/Pieces
Igwe Mpempe Epeepe Mpempe akwụkwọ 150w nwere nnukwu nsonaazụ ọkụ na 19500lm. Nke a na- agba mpempe ụgbọala nke ọhụụ 150W nwere ike dochie 400 watt HPS / HID. Ụgbọaka ụgbọala anyị nke ọkụ ọkụ bụ ụdị 3M na IP65. Nke a na- eji ogwe oghere na-adọba...
Ụzọ 200W Led Pathways Slipfitter Dusk Iji Dawn
Ọnụahịa otu: USD 88.99 / Piece/Pieces
Anyị 200w Dusk na Dawn Photocell Led Outdoor Pathway Lights bụ 26000lm, arụmọrụ bụ ruo 130lm / w na-enwu gbaa dị ka ìhè. Ejirila Kits Lunder Ụzọ Kedu na 100-277V ngwa ma na-enwu gbaa ma ọ bụrụ na ịdabere na ya na arụmọrụ dị egwu 120V Led Pathways...
240W Led Pathway Area Light Saxtures Slipfitter
Ọnụahịa otu: USD 99 / Piece/Pieces
Ebe nchekwa anyị dị na 240w malite na akpaghị aka na mgbede, na-emechi ya mgbe ọpụpụ, 31200 lumen output, 100-277V AC ọsọ ọsọ. Ụzọ a dị n'okporo ụzọ na-enwu gbaa nwere ike dochie anya 800W HID HPS MH ìhè. Na Best Dugara ụzọ Ìhè bụ oké na-egbuke...
100W Na-echekwa ebe a na-edebe ihe igwefoto
Ọnụahịa otu: USD 63 / Piece/Pieces
Na-achọ ọrụ dị arọ, dị ike na-akwụ ụgwọ-arụmọrụ nke N'èzí Led Garage Light nke na-enye ogologo ndụ nke ihe karịrị 50,000 awa nke na-adịghị arụ ọrụ ọ bụla? Uche a na-ejide igwe ọkụ na-adọba ụgbọala emebe iji gbochie ihu igwe ihu igwe na-enye...
240W N'èzí Led Street Light Fixture 5000K
Nke a 240w n'èzí n'èzí na- enye ihe kachasị mpepụta nke 31200lm na 5000K White Light. Nke ahụ bụ nnukwu ọkụ arụmọrụ nke 130 LM / W! Anyị 240w Street Light Fitting bụ ngbanwe zuru oke maka ọkụ 800W HID / HPS site na iri 240W, belata 67% nke...
320W Okporo Ụzọ Okporo Ụzọ na-adọba ụgbọala mpempe akwụkwọ ọkụ
Anyị na-eme ka Ụlọikpe Tennis DLC na- agba chaa chaa bụ ọrụ zuru oke maka ugbo, yard, ụgbọala, ụzọ ụkwụ, oghere na azụmahịa. Ike a zuru ezu 320W Ogwe ụgbọala na-adọba ụgbọala gbanyere ìhè Kpọrọ ọkụ ọkụ 1000W. Enwere ike ịwụnye Ọdụl 320w Led Street...
240W Na-edebe ọdụ ụgbọ oloko Lot Street
Anyị 240w Ejiri Ìhè Gburugburu bụ 31200 Lumens na 5000K ìhè na-acha ọcha. 240w Street Lights Bulbs jiri ika LEDs na Ike arụmọrụ 130lm / w. Nke a 240w Led Car Lot Light Fixtures dị mma iji dochie anya omenala 800w metal halide. Site na ngbanwe nke a...
200W n'èzí n'èzí ụgbọala Lot Street Lighting Fixtures
Anyị 200w Street Lighting Fixtures na -egbukepụ egbukepụ nke oke 26000lm na arụmọrụ dị mma nke 130lm / w. Nke a 200w n'èzí n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè ụgbọala nwere ike ibelata ego eletrik gị ruo pasent 75 site na dochie ihe ntanetị nke dị ugbu...
150W Ogwe Mpempe ụgbọala Na-ere Ahịa Ejiri Ìhè 19500LM
Ụlọ ụgbọala adọba ụgbọala anyị na- ere ọkụ bia na nbudata nkedo na-eme ka eji daa n'osisi onu ogugu di iche iche na ndu ndu uzo di iche iche. nwere ike gbanwee ma ọ bụ ala site na ntanetị ma ọ bụ ebe a na-ahụ anya maka ntụziaka ziri ezi nke ọkụ...
100W Ụzọ Ịgba Ọhịa n'èzí
Ụzọ anyị na-aga n'okporo ụzọ na-abịa na ihe ntanetụ foto nke dusk-to-dawn nke na-achọ ìhè ihu igwe na ike ọkụ na / na-akpaghị aka. Echegbula onwe gị banyere Led Road Light ga-ekpo ọkụ nke ukwuu, Mee ka imepụta ọkụ ọkụ na-eme nke a n'èzí...
320W Jiri Oghere Uhie Azụ Ụgbọ Mmiri na Dawn
Ọnụahịa otu: USD 109 / Piece/Pieces
Anyị 300W Ejiri akpụkpọ ụkwụ na- abịa na ihe ntanetịpụ foto nke ọhụụ nke na-achọpụta ihu igwe na ike ọkụ na / na-akpaghị aka. Nke a na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-enye 41600 Lumens na 5000K Lightlight. Nke a dugara Area Light mgbede Iji Dawn...
320W 480 Volt Led Poles Lights with Photocell
Ihe DLC anyị nwere ike ịkwanyere ebe a na-emepụta ogwe ọkụ na ogwe osisi nwere oke ọrụ zuru oke maka ugbo, yard, ụgbọala, ụzọ ụkwụ, ihe owuwu ụzọ mbata na ịzụ ahịa. Mmiri a zuru ezu 320W 480 Volt Led Pole Lights yiri otu puku ọkụ ọkụ nke 1000W. The...
240W Gburugburu ebe a na-ekpo ọkụ ọkụ Fotocell
Anyị na-abọ n'ehihie ụtụtụ Led Mbadamba Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri na-agụnye Photocell, Ogwe aka na Akpa maka Ogwe ma ọ bụ Mgbidi Wall. Nke a Gburugburu Ebe Ekegogogogogo zuru oke maka Garages, Alleyways, Ogige ụgbọala na Mgbidi Ụlọ. A na-ahụ maka ọrụ...
300 Watt Led Na-adọba ụgbọala na ọkụ ọkụ ọkụ 39000LM
Ọnụahịa otu: USD 106 - 107 / Piece/Pieces
The 300 Watt Led Na-adọba ụgbọala Light Light na- eji elu-arụmọrụ ikanam ibe SMD3030 nke nwere ike iru 130Lm / w, total 39000Lm.This 480 Volt Led Car Lot Lights abịa na kemeghi ileghara-fitter ugwu mgbodo na esi jidesie okporo osisi ruo 2.4 "....
240W Ogwe Ụlọọrụ Na-adọba ụgbọala n'ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ
Ọnụahịa otu: USD 87 - 89 / Piece/Pieces
Nchekwa Ike - Nke a 240W Led Parking Lot Light Replacement enye 31200 Lumens na 5000K ìhè na-acha ọcha. Jiri mpempe akara na arụmọrụ nke ọkụ 130lm / w, 240W Na- echekwa bọmbụ ụgbọala Light Bulbs dị mma iji dochie anya ọdịnala 800w, ike Ị nweta ego...
200 Watt Led Na-adọba ụgbọala na Lot oghere Light Fixtures
Ọnụahịa otu: USD 78 - 85 / Piece/Pieces
Mmetụta Ịma Ọcha zuru oke: 26000lm na-egbukepụ egbukepụ egbukepụ ụgbọala na -agba bọmbụ Light Fixtures na- enye ìhè dị mma nke na-enweghị ìhè ma ọ bụ ọkụ ọkụ. Photocell na mkpirisi okpuchi, ikpuchi ihu igwe iji ọrụ chi ọbụbọ na foto foto ma ọ bụ...
Ọnụahịa otu: USD 57 - 80 / Piece/Pieces
Echiche M - Anyị Bbier 150 Watt Led Na-adọba ụgbọala Lens jiri SMD 3030 LED modules nke na-emepụta ruo 130 Lumens per watt ma nọgide na-enwe mmeri 90% karịa ihe karịrị 36K awa. Nke a Led Car Lot Lot Light Fixtures na -eji ọkwa ọkwa ọkwa nkịtị. Ụlọ...
Ọnụahịa otu: USD 179 / Piece/Pieces
240W LED Shoebox Light nwere nzọụkwụ 3 nke nkedo 20% / 50% / 75% / 100% ikuku ntanetị, ruo 240w, dochie 400w-500w metal halide & sodium dị elu, ihe nkwụsị zuru okè maka nkwụnye ngwongwo, okporo ụzọ, ụgbọ ala ụlọ ahịa na ogige ntụrụndụ. 240W LED...
Ọnụahịa otu: USD 69.99 / Piece/Pieces
Nke a na Dusk to Dawn Led Garage Light edepụtara maka ngwa 100-277V ma na-egbuke egbuke mgbe ndabere na arụmọrụ dị oke egwu. Okpukpo ugbo ogbagba nke ejiri gbasaa emetere 19,500 lumens nke dị jụụ, eke, ma ọ bụ ọkụ na-acha ọcha ọkụ na atụmatụ 1-10V...
China Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ Ngwa
Ọkụ Egwuregwu Egwuregwu Ogwe Ọdụm Lot Light bụ UL DLC kwadoro. Dị ka ọtụtụ ebe ndị ọzọ na- adọba ụgbọala na-adọkpụ , Lights Car Lot Lights For Sale ha bu oriọna. Ezubere iji mee ka ìhè dị n'akụkụ buru ibu, Ogwe Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ejiri Nchekwa mara mma maka nkwụsa ụgbọala . Ha dị na watts, voltages. Nweta nnukwu nchịkọta nke ọdụ ụgbọ ala ìhè maka ebe a na-adọba ụgbọala na otutu oghere na ọnụ ahịa ego. Anyị na-enye ihe ndị yiri ogwe ọkụ na ndozi maka ọrụ azụmahịa
Ejiri Ogwe Mpempe Ogwe Ọdụ Ụgbọala Led Park Ebube Mpempe ụgbọ oloko mara mma Ebe a na-echekwa ya Ejiri Ogwe Ọdụ Ụgbọala Erugoro